Ikhaya - IFama yeeNyawo zeHinds
Qhagamshelana nathi: 704-992-1424 (Huntersville) okanye 828-274-0570 (Asheville)
Imbali: Ibali likaPuddin
Le yindawo ka Puddin
Inkqubo yokukhwela yoNyango
Ukutyhila Ukwenzakala kwengqondo
Inkqubo yoSuku lweVirtual
Ivolontiya kunye nomfundi wangaphakathi
NGOKU UYAMKELELA IZICELO
NGENKQUBO YETHU YOSUKU LWENGQONGQO Faka isicelo apha!
Inikezelwe ekuncedeni abantu abaphila nokwenzakala kwengqondo.
Injongo yethu kukwandisa amandla okwenzakala emva kokwenzakala kwabantu abaphila nokwenzakala kwengqondo ngeenkqubo ezihlangeneyo, ezizodwa nezipheleleyo; sivumela amalungu ethu ukuba enze imisebenzi enentsingiselo ngeli lixa ephuhlisa ukuziva esekhaya nakuluntu olungqongileyo. Siza kuwufeza lo msebenzi ngeenkqubo ezizodwa, ezijoliswe kumntu, emva kokubuyisela kwisimo sangaphambili, ezisekelwe kuluntu.
Jonga ingxelo yethu yoNyaka ka-2021
IiNkqubo zoSuku kunye nezokuHlala
Usuku lweFama yeeNyawo zikaHinds kunye neenkqubo zokuhlala lutshintsho lwepharadigm ukusuka kunyango lwemveli lonyango lwabantu abaphila nokwenzakala kwengqondo ukuya kwimodeli ebandakanya impilo epheleleyo kunye nendlela yokuphila, exhobisa amalungu malunga nomsebenzi kunye nentsingiselo yobomi emva kokwenzakala. Idalwe, kwaye isenzelwa, abantu abaphila namalungu okwenzakala kwengqondo bathatha inxaxheba ngokusebenzayo kulo lonke iziseko zenkqubo.
yethu Iinkqubo zoSuku zigxile ekuncedeni ilungu ngalinye ukuba lifumane "isiqhelo esitsha" sazo ngokusebenzisa inkqubo eguquguqukayo kwindawo kunye neenkqubo ezisekelwe kuluntu ezigxile kwingqiqo, ubugcisa, uvakalelo, umzimba, intlalo kunye nemisebenzi yangaphambili. Iinkqubo zethu zosuku zibekwe kuzo zombini IHuntersville kwaye Asheville, EMantla Carolina.
Le yindawo ka Puddin yindlu yobugcisa, i-6-ibhedi yokunyamekela intsapho yabantu abadala abanokulimala okubuhlungu okanye okufunyenweyo kwengqondo. Eli khaya liyilelwe kwaye linabasebenzi bokujongana neemfuno ezintsonkothileyo zabantu abafuna uncedo oluphakathi ukuya kolona luphezulu kwimisebenzi yabo yemihla ngemihla (ADLs). Indawo kaPuddin ikwikhampasi yethu yaseHuntersville.
I-Hart Cottage yindlu yokuhlala exhaswa ngeebhedi ezi-3 ezenzelwe ukuhlangabezana neemfuno zabantu abadala abanokulimala kwengqondo abazimeleyo kunye nayo yonke imisebenzi yokuphila kwansuku zonke (ADLs), kodwa bafuna uncedo oluncinci ukuya kwimodareyitha kunye nokulawula ukufezekisa imisebenzi kwaye bahlale bekhuselekile. IHart Cottage ikwikhampasi yethu yaseHuntersville.
Amalungu enkqubo yokuhlala ayakhuthazwa ukuba azibandakanye, asebenzisane kwaye athathe inxaxheba kwimisebenzi eqhubekayo yeenkqubo zosuku ngokunjalo.
Uncedo Lwakho Luyafuneka
Umnikelo omnye wenza umahluko omkhulu.
Inkxaso yakho yenyanga iya kusinceda siqhubeke nokubonelela ngeenkqubo ezizodwa kunye nezintsha kubantu abadala abanokulimala kwengqondo kunye neentsapho zabo
Cofa APHA ukuze ufunde indlela yokuxhasa iFama yeeHinds' Feet!
Ukuchaphazela Ubomi Babantu
"Ukuqala kwam ukwenzakala, ndatsibela kwiindawo ezahlukeneyo zokubuyisela abantu kwimeko yesiqhelo. Ndandiphambene kwihlabathi kwaye ndifuna ukuya ekhaya. Ekugqibeleni, kufuneka wamkele ukulimala kwakho kunye nobunzima. Ndifunde umonde kubantu abandingqongileyo kunye mna."
"Andikwazi ukwenza izinto ebendikade ndikwazi ukuzenza, kodwa ndifumana iindlela ezintsha kunye neendawo zokuhlala ukuze ndikwazi ukwenza ezo zinto."
"Ndenze abahlobo abaninzi eFama. Abanye abathathi-nxaxheba banobubele bonke, kwaye ndiyakonwabela ukuba kunye nabo. Ndikwathanda ukusebenzisana nabasebenzi. Sonwaba kakhulu kunye."
"Andikwazi ukwenza oku ndedwa, kodwa kuphela ndinokukwenza oku. Kwaye, ukuba phakathi kwabantu abafana nam kundifundise umonde wokuvula amehlo am kwaye ndibone abanye ngolunye ukukhanya."
"Inkqubo yosuku ibe negalelo elikhulu kubomi bam. Indinike inkululeko eyaneleyo yokwenza nokufunda kwiimpazamo zam."
"Indlela yakho yobuntu yokwakha intlonipho, ukuzithemba kunye nentlonipho phakathi kwamalungu, abasebenzi kunye nabazali iqaqambile ngalo lonke ixesha sindwendwela."
"Ukhule kakhulu kule minyaka idlulileyo ngeendlela ezininzi. Unoluntu kwi-Hinds Feet Farm yabahlobo kunye namava amnceda ukuba aphumelele, akhule kwaye abe nobomi obonwabisayo."
Dibana nomfundi wethu waseHuntersville, uMaggie!
Dibana nomfundi wethu wase-Asheville, uAlex!
Dibana noMfundi Wezempilo oManyeneyo, uNatalia!
Matshi 1, 2022
Dibana nomfundi wethu weNkqubo yoSuku lwaseHuntersville, uLauren!
BHALISA KULUHLU LWE-imeyile!
Ilungelo lokushicilela © 2020 iFama yeeNyawo zeHinds. Onke amalungelo agciniwe. Yilwa ngu Umahluko Wenziwe.
I-Hinds' Feet Farm ngumbutho ongenzi nzuzo 501 (c) 3.